Madaxweyne Geelle oo Wallaac ka muujiyay isbedelka ka hana qaaday Geeska Afrika | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Geelle oo Wallaac ka muujiyay isbedelka ka hana qaaday Geeska Afrika
Madaxweyne Geelle oo Wallaac ka muujiyay isbedelka ka hana qaaday Geeska Afrika
IsmaaciilCumar Geelle Madaxweynaha Jabuuti ayaa walaac xooggan ka muujiyay is-bedellada ka socda GeeskaAfrika, isagoo ku taliyay in la dhawro dalalka gobolka, islamarkaana Umadda gobolka ay leeyihiin Ururo ka shaqeeya Isdhexgalka.
Madaxweyne Geelle waxaa uu sheegay inuu soodhaweynayo isbedellada ka socda gobolka, balse loo baahan yahay in isbedellada socda laga eego faa’iidooyin iyo wixii dibin-daabyo ah ee ku duugan.
“Waxaa wanaagsan in fiiro dheer loo yeesho waxa ay dunidu rabto iyo sida ay dalalkakale ee gobolku ula fal-geli karaan isbedellada socda,” ayuu yiri Madaxweynahawaddanka Jabuuti oo ku maahmaahay; ‘Waan Baahanahay Bahallo looma cumo’.
Geelleayaa xusay in dalalka Geeska Afrika ayleeyihiin urur ay ku mideysan yihiin loo yaqaanno IGAD, kaasoo oo guta xilka iskaashiga dalalka Gobolka, isagoo xusay in looga dambeeyo howlahais-dhex-galka gobolka.
“Tusaaleahaan Dowladaha Jabuuti iyo Itoobiya waxay qaadeen talaabooyin ku dayasho mudan, kuwaasoo ku saabsan dhanka is-dhex-galka wadamada gobolka,”ayuu yiri Madaxweyne Geelle.